Emva-yokuthengisa Service - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
Q1: Yintoni eza kufundiswa wenkonzo pre-ukuthengiswa?
A1: Ukongeza yombuzo imveliso inombolo inxenye, nathi kwakhona ukunika imveliso technical iparameters. Ngokuba umyalelo wokuqala, elinye okanye amabini iisampuli ezamahala zingafundiswa ngaphandle kwentlawulo zokuhamba.
Q2: njani inkonzo ukuthengiswa?
A2: Siza khetha ukuthuthwa kunye ngeendleko okwelo kubaxumi. Zombini candelo kunye nomgangatho isebe zobugcisa isiqinisekiso ziya kunikwa umdlalo epheleleyo, khon 'ukuze ukuqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Yethu yabasebenzi yokuthengisa uya kukugcina kufakwa ngenkqubela zokuhamba. Ukongezelela, baya bayile sikuzalise uxwebhu yokuthumela.
Q3: elide kangakanani na ixesha umgangatho isiqinisekiso? Yintoni oncokola ephambili inkonzo emva-kwentengiso?
A3: Kwi sengxoxo-bume yesicelo eqhelekileyo neoli elungileyo injini:
isiqinisekiso yecebo umoya: iiyure 2,000;
isiqinisekiso of oil filter: iiyure 2,000;
External Uhlobo Air Oil isahlukanisi: iiyure 2,500;
Eyakhelwe-ngaphakathi Udidi Air Oil isahlukanisi: iiyure 4,000.
Ngeli xesha umgangatho isiqinisekiso, ngexesha siya azise ukuba abasebenzi bethu zobugcisa ahlole ukuba imveliso ibe naziphi na iingxaki umgangatho kakhulu.
Q4: Indlela malunga nezinye iinkonzo?
A4: Umntu inika imodeli imveliso le, kodwa asinayo indlela enjalo. Phantsi kwezi meko, siza kuphuhlisa imodeli entsha imveliso ukuba umyalelo lincinane ifikelele. Ngaphezu koko, hlale siya kumema ukuba abenzelwa iinkonzo ukuba atyelele mveliso yaye bafumane uqeqesho olufanelekileyo lobugcisa. Kwakhona, nathi sikwazi ukufikelela kubathengi, anikele iiseshoni zoqeqesho lobugcisa.
Q5: Ingaba inkonzo OEM ekhoyo?